Oromiyaa/Itoophiyaa: 𝗪𝗔𝗥𝗥𝗔𝗔𝗤𝗦𝗔 𝗞𝗔𝗥𝗔𝗔 𝗠𝗔𝗤𝗘!! | Kichuu
Oromiyaa/Itoophiyaa: 𝗪𝗔𝗥𝗥𝗔𝗔𝗤𝗦𝗔 𝗞𝗔𝗥𝗔𝗔 𝗠𝗔𝗤𝗘!!
[𝗦𝗕𝗢 – 𝗠𝗨𝗗𝗗𝗘 𝟬𝟮,𝟮𝟬𝟮𝟬] Fincilli Diddaa Gabrummaa (FDG), Fincilli Xumura Gabrummaa (FXG) dhuma irratti Warraaqsi Oromoo ijoollee Oromoo ol-guddattuu akkanaafaallee dabalatee ilmaan Oromoo, qabsoowota lakkaa’uun hin salphanne kumaantama hedduu nyaatee sirna EPRDF daaresse.
Oromoon ilmaan isaa kumaantamaan itti gabbaree warraaqsa geggeessus bu’aan warraaqsa isaatii garuu akka inni yaadeef hin taane; warraaqsichi butamee daandii gadhiisee gara hin barbaachisne irra oofamuun xumurri isaa mirga Oromoo haaluu, gabrummaa baranee diriirsuu, roorroomaa fi cunqursaa Oromoo itti fufsiisuu ta’e. Inumaayyuu miidhaa fi gaaga’ama irra ulfaataa maddisiiseef.
Warraaqsichi qabaa baduu fi karaa maquu isaa irraa kunoo har’a akkuma hunduu argu Oromoo gatii gafalchiisaa jira. Warri baroota qabsoo fi waldhaansoo bara bittaa abbaa irrummaa EPRDF waggoota 29 kabaa fi dagalee sirnichaa ta’anii hojjechaa turan, sochiin Oromoo sadarkaa kana ni ga’a jedhanii takkaa yaadanii hin beekne, wayta warraaqsi Oromoo morma isaanii bira gahuu hubatanii fi diddaan sun of duuba kan hin deebine ta’uu mirkaneeffatan haala sirnicha keessa turetti gargaaramuudhaan Oromoo gowwoomsanii ykn afanfajjessanii warraaqsicha butatuun daandii ofiif barbaadan irra oofan. Dantaa Oromoo ittiin guutuuf hojjechuu irraa, dantaa sirna Itophiyummaa gaaffii polotikaa Oromoo baroota hedduuf jiraatee as gahe dura dhaabbatu ittiin god-dhaabuuf oolfatan.
Kun ololaaf ykn jibbiinsaaf osoo hin taane tokko tokkoo dalagaa biyya kana keessatti hojjetamaa jiru irraa hubachuutu danda’ama. Jijjiiramnii fi ce’umsi hawwame guutuutti kufeera haala jechisiisu irra ga’ameera. Warri qabsoo fi warraaqsaan sirna EPRDF dadhabsiisuu fi kuffisuu keessatti bifa dhaabaanis ta’u nam-tokkeen qooda duraa kennan akka ABO faa, darbee ammoo Qeerroon (Ka’imman) Oromoo diina taasisamanii har’a akka bineensa daggalaatti adamsamanii ajjeesamu; hidhamu; xiqqeessamu.
Addi Bilisummaa Oromoo kabajaan maleef, har’a maqaan adda addaa itti moggaasamee hogganootni, miseensotnii fi deggertootni isaa ajjeesamuu irraa hanga hidhamuutti tarkaanfiin irratti fudhatama. Faallaa isaa kanneen gufuu qabsoo turan, qabsoo fi warraaqsa deemaa ture keessatti gaaga’ama guguddaa saba Oromoo irratti fidan har’as dalagaa badaa isaanii kaleessatti gaabbii tokko malee sirna amma jiru waliin gochuma kaleessaa san itti fufanii jiran.
Warraaqsi Oromoo karaa maquu fi butamuun akka sabaatti dhibdeelee gugurdoo isa mude kan jennuufis kanneen irraa ka’uudhaani. Haalli ammaa daran walxaxaa fi ulfaataa dha. Garuu ammoo Oromoon sirreessuu fi haala fedhe keessaayyuu ba’uuf ga’umsa itti qaba. Mirguma heerri biyya kanaayyuu kennuuf irraa osoo hin gorin Oromoon yoo ol ka’ee kabajamuu mirga isaaf sagalee dhageessise waa hedduu jijjiiruu fi sirreessuu danda’a. Mirga isaas guutuutti kabajsiifachuu fi furtuu rakkoo Impaayerattii fi Godinichaa ta’uu danda’a.
Garuu Oromoon waan burjaajii keessa jiru fakkaata; ija irriba keessaan waan deemaa jiru waan ilaalaa jiru fakkaata. Garuu ta’uu hin qabu. Burjaajii fi afanfajjii darbees hirriba keessaa ka’uu dha qabna. Mirga keenyaaf Sagalee keenya dhageessifachuun mirga uumamaa ti waan ta’eef, osoo dhumaa jirruu jirra ykn nagaa qabna jechuun waan hin danda’amneef sagalee keenyaan mirga keenya haa kabajsiifannu.
Namichi Abbaa Gadaa Booranaa ta’e kan #Kura_Jaarsoo jedhamu” Guyyaa kaleeysaa Radioni BBC news A/Oromoo irratti dhimma Waraana Bilisummaa Oromoo/WBO waan inni dubbate dhageeysanii jamaa?
Abbaan Gadaa fi Sirni Gadaas Boorana Qofatti hafte/argamti jedhanii yeroo hedduu gaafa nutti himamu dhugaa natti fakkaachaa ture!
Edaanuu Caasaa Opdotu haga yoonaatuu maqaa golgaa abbaa Gadaatiin warri kun Oromoo gowwomsaa turan.
Abbaan gadaadhaa gaafa sabni Oromoo miidhamuu fi bilaashatti/badii tokkoon maletti humna waraana Bilxiginnaatiin ajjeefamu” osoo adda dureen dhoowwuu fi falmuu qabuuti inumaa warra saba keenya ajjeesuu fi mana irratti gubuu waliini qabsaayota sabichaa irratti duuluu jalqaban.